သမီးဖြစ်သူကို Facebook မှာသိတဲ့သူနှင့်ပေးစားဖို့ အမေကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားရာမှ မအေရောသမီးပါပျောက်ဆုံးနေ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / သမီးဖြစ်သူကို Facebook မှာသိတဲ့သူနှင့်ပေးစားဖို့ အမေကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားရာမှ မအေရောသမီးပါပျောက်ဆုံးနေ
သမီးဖြစ်သူကို Facebook မှာသိတဲ့သူနှင့်ပေးစားဖို့ အမေကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားရာမှ မအေရောသမီးပါပျောက်ဆုံးနေ
ရန်​ကုန်​တိုင်း​ဒေသကြီး သန်​လျင်​မြို့နယ်​ ​ထန်းပင်​ကုန်းရပ်​ကွက်​ ထန်းပင်​ကုန်း (၆)လမ်း အမှတ်​(၂) တွင်​​နေထိုင်​​သော အဘ – ဦး​ကျော်​​ကျော်​ ၊ အမိ – ​ဒေါ်​အေး​အေး​မော်​ တို့၏ သမီးဖြစ်​သူ မယုနန္ဒာလွင်​ အသက်​(၁၆နှစ်​) သည်​​ ​​ခြေဖ​နောင့်​ဒဏ်​ရာ​ကြောင့်​ သန်​လျင်​ပြည်​သူ့​ဆေးရုံကြီးတွင်​ မိခင်​ဖြစ်​သူ ​​ဒေါ်​အေး​အေး​မော်​ နှင့်​အတူ ​ဆေးကုသမှု့ ခံယူ​နေပါသည်​။
အမှတ်​(၂၉) ထန်းပင်​ကုန်း (၆)လမ်း​နေ ဘကြီးဖြစ်​သူ ဦးစိုးဝင်းမှ ​(၁၃.၇.၂၀၁၇) ည​နေ 7:00 ခန့်​အချိန်​တွင်​ ​ဆေးရုံသို့သွား​ရောက်​ကြည့်​ရှု့ ရာ မိခင်​နှင့်​အတူ ​ဆေးရုံမှဆင်းသွား​ကြောင်းသိရှိရသည်​။ ထိုအခါ ဘကြီးဖြစ်​သူမှအိမ်​သို့​ရောက်​ရှိလာခြင်းမရှိ​သော​ကြောင့်​ စုံစမ်းရာ ထန်းပင်​ကုန်း(၁)လမ်းရှိ အ​​ဒေါ်ဖြစ်​သူ၏အိမ်​သို့​ရောက်​ရှိ​နေ​ကြောင့်​သိရသည်​။ (၁၄.၇.၂၀၁၇) ​နေ့လည်​တွင်​ ဘကြီးဖြစ်​သူမှ အ​ဒေါ်အိမ်​သို့သွား​ရောက်​ကြည့်​ရှုရာ မ​တွေ့သဖြင့်​ အ​ဒေါ်ဖြစ်​သူ​ပြောပြချက်​အရ ” ၁၃ရက်​​နေ့ ​နေ့လည်​၂နာရီခန့်​က အိမ်​သို့​ရောက်​ရှိလာပြီး သမီးဖြစ်​သူအား မိခင်ဖြစ်သူမှ ​​​အိမ်​​ထောင်​ပြုရန်​အတင်းအဓမ္မတိုက်​တွန်း​သည်​။
သူမနှင့်​ ​ပေးစားမည်​ဟုဆို​သော ​ယောကျာ်းမှာ Facebook တွင်​ သူမ မိခင်​နဲ့အဆက်​အသွယ်​ရှိ​သော သူစိမ်း​ယောကျာ်းတ​ယောက်​ဖြစ်သိဟုသိရသည်​။ ထိုအခါ သမီးဖြစ်​သူမှ လက်​မခံပဲ ငြင်းဆန်​​သော​ကြောင့်​ အ​မေဖြစ်​သူမှ ကိုယ်​ထိလက်​​ရောက်​ရိုက်​နှက်​၍ ထို​နေ့ည​နေ ၅နာရီခန့်​တွင်​ အ​ဒေါ်အိမ်​မှ အတင်းဆွဲ​ခေါ်သွား​ကြောင်းသိရသည်​။
ထို့​နေ့မှစ၍ ယ​နေ့အထိ အဆက်​အသွယ်​မရပဲ မိခင်​​ရောသမီးပါ ​ပျောက်​ဆုံး​နေပါသဖြင့်​ ​တွေ့ရှိပါက အ​ကြောင်းကြား​ပေးရန်​ ​မေတ္တာရပ်​ခံအပ်​ပါသည်​။ အ​ကြောင်းမကြားပဲ လက်​ခံထားသူများအား တရားဥပ​ဒေအရ ထိ​ရောက်​စွာအ​ရေးယူမည်​ဖြစ်​ပါသည်​။ ​တွေ့ရှိ​ကြောင်းအ​ကြောင်းကြား​ပေးပါက ထိုက်​တန်​စွာ ​ကျေးဇူးဆပ်​ပါမည်​။
အမှတ်​(၂၉) ထန်းပင်​ကုန်း (၆)လမ်း ထန်းပင်​ကုန်းရပ်​ကွက်​ သန်​လျင်​မြို့​
Phone No. – 09-799459658 (ဦးစိုးဝင်း)
ရနျ​ကုနျ​တိုငျး​ဒသေကွီး သနျ​လငျြ​မွို့နယျ​ ​ထနျးပငျ​ကုနျးရပျ​ကှကျ​ ထနျးပငျ​ကုနျး (၆)လမျး အမှတျ​(၂) တှငျ​​နထေိုငျ​​သော အဘ – ဦး​ကြျော​​ကြျော​ ၊ အမိ – ​ဒျေါ​အေး​အေး​မျော​ တို့၏ သမီးဖွဈ​သူ မယုနန်ဒာလှငျ​ အသကျ​(၁၆နှဈ​) သညျ​​ ​​ခွဖေ​နောငျ့​ဒဏျ​ရာ​ကွောငျ့​ သနျ​လငျြ​ပွညျ​သူ့​ဆေးရုံကွီးတှငျ​ မိခငျ​ဖွဈ​သူ ​​ဒျေါ​အေး​အေး​မျော​ နှငျ့​အတူ ​ဆေးကုသမှု့ ခံယူ​နပေါသညျ​။
အမှတျ​(၂၉) ထနျးပငျ​ကုနျး (၆)လမျး​နေ ဘကွီးဖွဈ​သူ ဦးစိုးဝငျးမှ ​(၁၃.၇.၂၀၁၇) ည​နေ 7:00 ခနျ့​အခြိနျ​တှငျ​ ​ဆေးရုံသို့သှား​ရောကျ​ကွညျ့​ရှု့ ရာ မိခငျ​နှငျ့​အတူ ​ဆေးရုံမှဆငျးသှား​ကွောငျးသိရှိရသညျ​။ ထိုအခါ ဘကွီးဖွဈ​သူမှအိမျ​သို့​ရောကျ​ရှိလာခွငျးမရှိ​သော​ကွောငျ့​ စုံစမျးရာ ထနျးပငျ​ကုနျး(၁)လမျးရှိ အ​​ဒျေါဖွဈ​သူ၏အိမျ​သို့​ရောကျ​ရှိ​နေ​ကွောငျ့​သိရသညျ​။
(၁၄.၇.၂၀၁၇) ​နလေ့ညျ​တှငျ​ ဘကွီးဖွဈ​သူမှ အ​ဒျေါအိမျ​သို့သှား​ရောကျ​ကွညျ့​ရှုရာ မ​တှသေ့ဖွငျ့​ အ​ဒျေါဖွဈ​သူ​ပွောပွခကျြ​အရ ” ၁၃ရကျ​​နေ့ ​နလေ့ညျ​၂နာရီခနျ့​က အိမျ​သို့​ရောကျ​ရှိလာပွီး သမီးဖွဈ​သူအား မိခငျဖွဈသူမှ ​​​အိမျ​​ထောငျ​ပွုရနျ​အတငျးအဓမ်မတိုကျ​တှနျး​သညျ​။ သူမနှငျ့​ ​ပေးစားမညျ​ဟုဆို​သော ​ယောကျြားမှာ Facebook တှငျ​ သူမ မိခငျ​နဲ့အဆကျ​အသှယျ​ရှိ​သော သူစိမျး​ယောကျြားတ​ယောကျ​ဖွဈသိဟုသိရသညျ​။
ထိုအခါ သမီးဖွဈ​သူမှ လကျ​မခံပဲ ငွငျးဆနျ​​သော​ကွောငျ့​ အ​မဖွေဈ​သူမှ ကိုယျ​ထိလကျ​​ရောကျ​ရိုကျ​နှကျ​၍ ထို​နညေ့​နေ ၅နာရီခနျ့​တှငျ​ အ​ဒျေါအိမျ​မှ အတငျးဆှဲ​ချေါသှား​ကွောငျးသိရသညျ​။
ထို့​နမှေ့စ၍ ယ​နအေ့ထိ အဆကျ​အသှယျ​မရပဲ မိခငျ​​ရောသမီးပါ ​ပြောကျ​ဆုံး​နပေါသဖွငျ့​ ​တှရှေိ့ပါက အ​ကွောငျးကွား​ပေးရနျ​ ​မတ်ေတာရပျ​ခံအပျ​ပါသညျ​။ အ​ကွောငျးမကွားပဲ လကျ​ခံထားသူမြားအား တရားဥပ​ဒအေရ ထိ​ရောကျ​စှာအ​ရေးယူမညျ​ဖွဈ​ပါသညျ​။ ​တှရှေိ့​ကွောငျးအ​ကွောငျးကွား​ပေးပါက ထိုကျ​တနျ​စှာ ​ကြေးဇူးဆပျ​ပါမညျ​။
အမှတျ​(၂၉) ထနျးပငျ​ကုနျး (၆)လမျး ထနျးပငျ​ကုနျးရပျ​ကှကျ​ သနျ​လငျြ​မွို့​
Phone No. – 09-799459658 (ဦးစိုးဝငျး)